Akwụkwọ Darren Bridger na Martech Zone |
Edemede site na Uchenna Onyekwere
Darren Bridger na-arụ ọrụ dịka onye ndụmọdụ nye ndị na-emepụta ihe na ndị na-ere ahịa, na-adụ ọdụ banyere iji na nyocha data na-abanye n'echiche ndị na-amaghị nke ọma na mkpali. Ọ bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ mbụ nke ụlọ ọrụ Consumer Neuroscience, na-enyere aka ịsụ ụzọ abụọ n'ime ụlọ ọrụ mbụ na mpaghara ahụ, wee sonye na ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa, Neurofocus (nke bụ akụkụ nke ụlọ ọrụ Nielsen), dị ka onye ọrụ nke abụọ na mpụga United States . Ọ na-arụ ọrụ ugbu a dị ka isi nke nghọta na NeuroStrata.
Kedu ihe bụ Neuro Design?
Saturday, March 4, 2017 Saturday, March 4, 2017 Uchenna Onyekwere
Neuro Design bụ ubi ọhụụ na - eto eto nke na - emetụta nghọta sitere na sayensị uche iji nyere aka rụpụta atụmatụ ndị dị ire. Nghọta ndị a nwere ike isi na isi mmalite abụọ pụta: generalkpụrụ izugbe nke Neuro Design kachasị mma nke sitere na nyocha agụmakwụkwọ na usoro nyocha mmadụ na akụrụngwa nke ọhụụ. Ndị a na-agụnye ihe ndị dị ka akụkụ nke ebe anyị na-ahụ anya na-eleba anya maka ịhụ ihe ndị na-ahụ anya, si otú a na-enyere ndị na-emepụta aka ide